Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Sheet-ka Gelaitn - Warshad Shiinuhu Gelaitn
Xaashida 'Gelat Transparency High' ee Macmacaanka sidoo kale wuxuu leeyahay kala sooc qaar ka mid ah, sida warqad gelatin ah keega mousse iyo warqada gelatin ee dubista.
Gelatin ayaa lagu riixay go'aanka gelatine, gelatin si dabiici ah uma jiro dabiiciyan, laga bilaabo maqaarka xoolaha, lafaha, tendon iyo unugyo kale oo ay kujiraan kolajiin, kadib daaweyn isdaba-joog ah oo kiimiko ah, hoos u dhac ku yimaadda hydrolysis-ka oo ay soo saartay iskudhafka polypeptide heterogeneous, kana kooban in kabadan 20 amino acids.
5g xaashi gelatin ah sidoo kale loo yaqaan Titanium gelatin sheet (5g). Caadi ahaan, xooggaTitanium gelatin sheet (5g) waa 150 ubax. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin-geedka wuxuu la mid yahay gelatin caadi ah, laakiin wuxuu ku jiraa qaab xaashida ah. Waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo moofo mousse, iwm.
3.3g gelatin sheet sidoo kale loo yaqaan xaashi gelatin naxaas ah (3.3g). Caadi ahaan, xooggaxaashi gelatin naxaas ah (3.3g) waa 180 ubax. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin-geedka wuxuu la mid yahay gelatin caadi ah, laakiin wuxuu ku jiraa qaab xaashida ah. Waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo moofo mousse, iwm.
2g xaashi gelatin ah sidoo kale loo yaqaan dahaarka gelatin dahab ah (2g). Caadi ahaan, xooggadahaarka gelatin dahab ah (2g) waa 220 ubax. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin-geedka wuxuu la mid yahay gelatin caadi ah, laakiin wuxuu ku jiraa qaab xaashida ah. Waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo moofo mousse, iwm.
2.5g gelatin sheet ayaa sidoo kale loo yaqaan warqad gelatin qalin ah (2.5g). Caadi ahaan, xooggawarqad gelatin qalin ah (2.5g) waa 200 ubax. Qalabka ceyriinka ah ee gelatin-geedka wuxuu la mid yahay gelatin caadi ah, laakiin wuxuu ku jiraa qaab xaashida ah. Waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo moofo mousse, iwm.